Ireo rongony 150 000 fototra izay milanja 1 680 kg tamina velaran-tany 20ha dia tao amin’ny sahan’Andohan’Ifasy, Ambanja. Ny rongony maina saika hamidy mitotaly 1 300 tratra kosa teo amin’ny kizo Mevadoany, Mahadera, kaominina Marotolana sy tao Ambohitrandriana, Betaindambo, kaominina Marovato, Ambilobe no tra-tehaka. Nopotehin’ny zandary nandritra ny hetsika ady amin’ny Jamala ireo ka nodorana ny andron’ny 13 septambra teo anatrehan’ny lehiben’ny distrika sy ny fitsarana rehefa vita ny taratasy mahakasika azy ireo. Hita ihany ny loharanon’ny zavamahadomelina izay nodradradraina tamin’ny
haino aman-jery nihanaka nanerana ny Nosy, indrindra tamin’iny tapany avaratr’i Madagasikara iny tato ato. Fantatra mantsy fa fototry ny fanafihana mitam-piadiana sy ny tsy fandriampahelemana
izay miha mahazo vahana hatrany ireto zavamahadomelina ireto.